Haddii loo baahdo, waxaan u socon doonnaa ilaa Ankara ee TÜDEMSAŞ | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasHaddii loo baahdo, waxaan u socon doonnaa ilaa Ankara ee TÜDEMSAŞ
16 / 03 / 2020 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Tudemsas, haddii loo baahdo, waxaan u soconnaa Ankara.
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Sivas (STSO) Kulankii Maarso ee Maarso waxaa lagu qabtay shirguddoonka gudoomiyaha baarlamaanka Çetin Yıldırım. Duqa magaalada Sivas Hilmi Bilgin iyo xubno ka tirsan golaha magaalada ayaa kulanka ka soo qayb galay marti ahaan.
Akhrinta bisha febraayo go’aamada bisha Febraayo, dhageysiga dacwada iyo liiska kharashyada ayaa laga dooday oo aqlabiyad aqbaleen
Isaga oo ku hadlaya magaca Komishanka Warshadaha, xubinta Golaha iyo Guddoomiyaha ESTAİ mailsmail Timuçin ayaa ka warramaya shirarka loo qabtay sidii Komishanka Warshadaha oo sheegay in ay jiraan hadalo kala duwan oo dadweynuhu ka sheegaan shirkadda cusub ee TÜDEMSAŞ, “Waxaa jira warar xan ah iyo sheegashooyin. . Ethem Sancak wuxuu aasaasay shirkad cusub magaalada Adapazarı sanadka 2019. Magaca shirkadda waa shirkadda BMC Rail Systems. Saaxiib la yiraa Murat Kavak ayaa madaxiisa la keenay. Saaxiibkan sidoo kale waa saaxiib laga soo wareejiyay Tareenka Gobolka. Waxaa jira warar xan ah. Hadda waxaa la yiri; Waxa ku yaal 400 oo acres gudaha Sivas, 500 acres ah oo ku taal Eskişehir, 400 acresna waxay ku taal Adapazarı, waxaana ku yaal dhulal badan oo qurux badan magaalada. Waxay soo jiidan kartaa dadka si lama huraan ah. Waxaan qabnaa in madaxda Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee 3da magaalo ay sidoo kale ku jiri doonaan guddiga agaasimayaasha ayna xubin joogto ah ka noqdaan. Sidan, si fudud ayey ula socon karaan.
Mustafa Eken, Gudoomiyaha Gudiga, oo warbixin siiyay xubnaha golaha ee ku saabsan waxqabadka iyo howlaha bisha Feberaayo, ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen ololihii iibsiga baska ee loo waday Sivasspor.
Eken wuxuu yidhi, “Waxaan bilownay olole iibsi bas oo loogu talagalay Sivasspor, kaas oo lagu bilaabay hoggaankayaga aqalkeenna, kuna dhammaaday ololaheena barnaamijka aan abaabulnay fiidkii Maarso 6. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo agaasimaheena, xildhibaanka, haweenka iyo ganacsatada da 'yarta ah iyo ganacsatadayada ina taageera arintan. Waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale ka xusho arrintan. Waxaan ololahan baska ka bilownay codsi ka yimid naadigayada iyo madaxweynaha Sivasspor. Waxaan bas siinay Sivasspor, kaas oo lahaa xilli wanaagsan. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo qof kasta oo naga taageeray ololahaan. Waxaan uga mahadcelinayaa adduunkeena ganacsiga arrintan. ”
Isaga oo tixraacaya arrinta ku xiritaanka TÜDEMSAŞ shirkadda lagu dhisi doono Ankara, ayuu Eken yiri; "Waxaan samaynay war-saxaafadeed ku saabsan arrinta guuritaanka ee 'TÜDEMSAŞ', oo ah ajandaha ajendaha Sivas dhowaan. War-saxaafadeedka aan soo saarnay, ku xigeenka AK Party Semiha Ekinci iyo maareeyaha guud ee TÜDEMSAŞ iyo madax ururkeena ganacsiga ayaa ka hadlay in xarunta meeshani tahay Ankara, iyo in Sakarya, Eskişehir iyo Sivas aysan dhaqdhaqaaqayn, wax walbana ay sii socon doonaan si la mid ah. Annagoo ah Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, waa inaan la wadaagno macluumaadka aan helnay dadweynaha iyo xubnaheena. Shaki kama qabno wanaagga iyo saxnaanta hay'adaha na wargeliya. Laakiin haddii wax qaldamaan, waxaan halkan uga socon doonnaa Ankara sidii TÜDEMSAŞ loo xiray ama loo yareyn lahaa. Sida Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, danteena kaliya iyo kiiskeena waa Sivas, horumarka Sivas, dhamaadka dhibaatada shaqo la’aanta. Halgankayagu wuxuu ku sii socon doonaa jihadaan, waxaan sii wadi doonaa dhaleeceynta iyo raacitaanka qurxinta laga sameeyay magaaladeena, xitaa haddii wax kale dhacaan.
Hadday u sii socon doonto sidii waxsoosaarka dhabta ah ee gawaarida xamuulka, waxaan dhahnay wax dhibaato ah ma jiraan. Waxaan dhahnay hagaag maahan. Waxaan kulan la yeelanay 4-tii subaxnimo ee Talaadada annaga oo ah Wasiirka Warshadaha, Wasiirka Beeraha iyo Wasiirka Deegaanka iyo Magaalaynta. Wararka ku saabsan TOBB waa la joojiyay. Waxaan diyaarinay faylkeena, waan siin karnaa iyaga. Waxaan ka mid nahay hay'adaha ku habboon inay wax ka sheegaan magaalada. Cidina ma dafiri karto tan. Tani waa ujeeddada loo dejiyey qolkan. Waxaan buuxin doonnaa waxa aan ka hadleyno oo aan ka hadalno, waxaan sameyn doonnaa mucaarad anshax leh inta aan ka soo horjeedno, ma aflagaadeyn doonno. Sababtaas awgeed, waxaan rabaa inaad wax ka ogaatid TÜDEMSAŞ; Annaga oo ah Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, waxaan raaci doonnaa ganacsigan. Waxaan rajeynayaa inaan la kulmi doono 3-da Rug ee Ganacsiga iyo Wershadaha Maalmaha soo socda. Markaa, waxaan la kulmi doonnaa wakiillada si aan uga wada hadalno xalka noocee ah ee aan heli karno. Waxaan qorsheyneynaa inaan kala hadalno Madaxweynahayaga sidii loo hagaajin lahaa meelahaas. TÜDEMSAŞ waa astaanta ugu qiimaha badan Sivas. Horey waa xaalad aad u xun in laga fekero in meeshan la xiri doono. Guddoomiyahayaga, si wanaagsan ayaan ula shaqeynaa Duqa Magaalada. Albaab ayaan u tagnaa si maalgashadeyaashu halkan u yimaadaan. Dhawaan, waxaan u qoondeynay 42 hektar oo dhul ah maalgashade. 700 oo qof ayaa shaqeyn doona. Waxaan isku dayeynaa inaan kordhinno shaqaalaheena, laakiin kuma talo jirno in TÜDEMSAŞ la xiro oo warshadaha ay soo socdaan. ratio hawada ku filan waa nagu Turkiga. Waxaan ka shaqeyn doonnaa kuna dadaali doonnaa maal-gashadayaasha cusub inay yimaadaan. ”
Waxay noqon doontaa masuuliyadeena inaan u mahadcelino Duqa Magaalada Hilmi Bilgin Sivas TSO Madaxweynaha Mustafa Eken iyo xildhibaanka, si aan u siino macluumaadka ku saabsan adeegyada la fidiyo, la kulanka xubnaha golaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sivas, iyo inaan ka wada hadalno ajendaha magaalada iyo dalka. Sababta oo ah socodka wadada adoo lahadlaya lana wadaagaya wakiillada magaalada had iyo jeer waxay ina siisaa awood. Markan, waxaan danaynaynaa kulankan aanu u qabannay degmo ahaan oo leh faham degmo oo danaynaya wada tashiga. ”
Waxaan ku soconaa Bay Bridge Bay bisha Juun
Sidee Loo Heli Karaa Heli Kara
Telefishinada loogu talagalay Ankara
Madaxweynaha Gokcek wuxuu ku adkeysanayaa baabuurka telefishanka ee Ankara!
Gaadiidka Ankara ayaa neefsanaya nidaamka fiilooyinka fiilooyinka
Vahap Munyar: YHT wuxuu sameeyey Konya oo ah xaafada Ankara
Laba xariijin oo cusub ayaa laga soo galayaa Ankara
Maamulaha Guud ee TÜDEMSAŞ